Bulsho TV Oo Balaadhin Ku Sameeyay Baahintiisa Gobollada Galbeedka - SomalilandPost
Home News Bulsho TV Oo Balaadhin Ku Sameeyay Baahintiisa Gobollada Galbeedka
Bulsho TV Oo Balaadhin Ku Sameeyay Baahintiisa Gobollada Galbeedka
Hargeysa, (SLpost)- Xaflad balaadhan oo lagu daah furayay telefishanka Bulsho Tv oo baahintiisa ku soo kordhiyay goboladda galbeedka ee Awdal iyo Gabiley ayaa xalay lagu qabtay Hotel Imperial ee Caasimadda Hargeysa.
Xafladaasi oo ay soo agaasimeen maamulka telefishanka Bulsho, ayaa waxaa ka soo qayb galay masuuliyiin isugu jiray xildhibaano, siyaasiyiin, culimo, madaxda TV-ga Bulsho iyo marti sharaf kale oo aad u badan.
Waxaana munaasibadaasi lagu soo bandhigay Barnaamijyo muuqaal ah oo ka hadlayay khayraadka kala duwan eek u duugan dalkan Somaliland, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen wax soo saarka Beeraha iyo ka faa’iidaysiga Kalluumaysiga.
Madaxa Barnaamijyadda iyo wacyi-gelinta ee Bulsho TV C/raxmaan Cismaan Cumar (C/raxmaan Xaaji), oo xafladaasi hadal ka jeediyay ayaa ka waramay Taariikhda iyo maraaxilkii kala duwanaa ee uu soo maray telefishanka Bulsho Tv, oo markii hore baahintiisu ay ku koobnayd caasimadda Hargaysa oo keliya, hase yeeshee ay imika bilaabeen in baahinta Bulsho TV laga daawan karro magaalooyinka Boorama iyo Gabiley.
Waxaanu sheegay inay Tvga ay ku xidhan yihiin Nus Malyuun dhallinyaro ah oo ku dhaqan Gobolada Maroodi-jeex, Awdal, Gabiley iyo Togdheer kuwaasi oo Tvga kala socda Ciyaaraha Caalamiga ah ee Adduunka.
Waxa kale oo isna halkaasi ka hadlay Sheekh Maxamed Macalin Cabdi Carab, oo ka mid ah Culimadda TV-ga ka jeediya Barnaamijyadda Diiniga ah, waxaanu Bulsho Tv ku ammaanay inay kaalin muuqata ku leeyihiin Telefishanada Dalka gaar ahaan baahinta Barnaamijyada Diiniga ah sida Tafsiirka Quraanka Kariimka ee Sheekh Dirir iyo Siirada Rasuulkeenii Suubanaa (NNKHA) ee Sheekh Aaden Siiro.
Guddoomiyaha Ururka Saxafiyiinta SOLJA, Maxamuud Cabdi Jaamac “Xuuto” oo isaguna ka mid ahaa Masuuliyiintii halkaasi hadalka ka jeediyey ayaa Bulsho Tv ku ammaanay mudada kooban ee uu jiray iyo dedaalka badan ee uu muujiyey.
Waxaanu yidhi “Laga soo bilaabo 2010 ilaa maanta oo Shan sano ah wuxu Tvgu sammeeyey Horumar balaadhan”.
Gabagabadii, waxa Xafladaasi ka hadlay Agaasimaha guud ee Bulsho Tv C/rashiid Nuur Wacays, isagoo si wayn ugu Mahadnaqay Bulshada ku xidhan Bulsho Tv ee ay ka mid yihiin ganacsatada, dhallinyarada iyo Haweenka.
Agaasime C/rashiid Nuur Wacays ayaa sidoo kale wuxu xusay inta aan Sannadkani dhammaan ay ku hawlan yihiin balaadhinta Tvga loona gaadhsiin lahaa baahintiisa guud ahaanba Dalka S/land.